पोखरा भद्रकाली माविमा ५ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीबीच कुटाकुट हुँदा एक जनाको मृत्यु • Ganthan News Pokhara
पोखरा, २६ माघ /कक्षा ५ मा पढ्ने विद्यार्थीहरु एक आपसमा झगडा हुँदा पोखरामा एक जना विद्यार्थीको ज्यान गएको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १३ स्थित भद्रकाली माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने होमबहादुर बिक र आशिष गुरुङबीच शौचालयमा झगडा भएको थियो । दुवै जना १५ वर्षका हुन् ।
अप्रेशन गरेका डा. कृष्ण कोइरालाले पहिल्यैदेखि स्वास्थ्य समस्या रहेकाले सोचेजति स्वास्थ्यमा प्रगति नभएको र ब्रेन डेथ भइसकेको बताए । होमका आफन्तले सामान्य घाउको निहुँ बनाउन नहुने भन्दै स्कुलले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन् । तर, विद्यालयले भने ट्वाइलेमा भएको झगडामा के गर्न सकिन्छ ? भनेको छ । आमा खिमकुमारीले रुँदै भनिन् ‘ट्युशन पढ्दिन ममी भन्थ्यो, मैले नै पढाएँ । खाना खुवाएर स्कुल पठाएको छोरो यस्तो भयो ।’
फेवा टेलिभिजनको हामीलाई भन्नु छ र गण्डकी टेलिभिजनको गण्डकी छड्कमो यस विषयमा सामाग्री प्रसारण भएका छन् । यी सामाग्रीहरु तयार हुने बेलासम्म बालकको मृत्यु भइसकेको थिएन ।
इडेन्स एकेडेमीको १५ औँ वार्षिकोत्सवमा विद्यार्थीलाई पुरस्कार शिक्षकलाई सम्मान